Shirkii Madaxda Midowga Afrika Oo Lagu Soo Gaba gabeeyey Magaaladda Addis Ababa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirkii Madaxda Midowga Afrika Oo Lagu Soo Gaba gabeeyey Magaaladda Addis Ababa
Shirkii Madaxda Midowga Afrika Oo Lagu Soo Gaba gabeeyey Magaaladda Addis Ababa
Waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta u ah Midowga Afrika lagu soo gabogabeeyey shirkii Madaxweynayaasha Afrika oo socday muddo labo cisho ah (30ka iyo 31da Janaayo 2011). Shirkan oo uu uga qeybgalayey wafdi uu hoggaaminayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia, ayaa shirku ku soo gabogaboobo si heer sare ah.
Shirkan waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha Somalia oo la qabtay labo shir oo gaar gaar ah muhiimna u ah Somalia. 30kii Janaayo ayaa la furay shirka guud ee Midowga ah, ha yeeshee isla 30ka Janaayo waxaa si gaar ah loo qabtay shirkii 17aad ee aan caadiga aheyn ee Madaxweynayaasha IGAD, kaas oo si gaar ah looga hadlay arrimaha Sudan, Somalia iyo Kenya.
Madaxweyne Sheikh Sharif Sh. Ahmed ayaa halkaas warbixin ku siiyey Madaxweynayaasha IGAD ugana waramay xaalada dhabta ah ee Somalia isagoo soo jeediyey tallooyin ku wajahan sidii xilliga kala guurka ah looga bixi lahaa, isla markaana arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo gargaarka bani’aadanimo dadaaladooda loo sii dardargelin lahaa. Ugu danbeyntii waxaa talo lagu soo jeediyey in Baarlamaanka Somalia waqtiga loo kordhiyo si aysan u dhicin in waddanka uusan yeelan dowlad, bacdamaa waqtiga uu ka dhacayo hay’adaha dowliga ah bisha August. Sidoo kale waxaa lagu taliyey in Somalia loo daayo inay go’aan ka soo gaaraan mustaqbalka waddankooda.
31kii Janaayo ayaa waxaa la qabtay shir heer sare ah (high level) oo ay shir guddoominayeen Xoghayaha Guud ee QM, Guddoomiyaha Midowga Afrika, iyo Shir-gudoonka IGAD. Shirkan ayaa si gaar ah looga hadlayey arrimaha Somalia. Waxaa kaloo shirkan ka soo qeybgalay, Madaxweynayaal ka socday Afrika, Madaxweynihii hore ee Ghana, Jerry Rowlings, Mas’uuliyiin heer sare ah oo ka socday US iyo UK iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne Sheikh Sharif ayaa warbixin la xiriirta arrimaha Somalia ka jeediyey halkaas, oo uu ka hadlay horumarka xukuumadda cusub ay ku tallaabsatay mudadii koobneyd, dadaalada socda oo ay ka mid tahay qorsheyaasha la rabo in marxaladda kala guurka ah looga gudbo.
Madaxweyne Sheikh Sharif waxuu hoosta ka xariiqay xaaladda abaaraha dalka ka jira iyo sida loogu baahanyahay in caalamku ay si deg-deg ah ummadda soomaaliyeed ugu soo gurmadaan.
Madaxweynuhu waxuu sheegay in shirkii IGAD la soo jeediyey labo fikradood ee ku wajahan sidii xaaladda kala guurka ah looga gudbi lahaa, waxuuna caddeeyey in Somalida ay wadatashiyo ka yeelan doonaan arrinkaas, isla markaana ay ka qaadan doonaan go’aanka ugu haboon si waddanka loo badbaadiyo shacabkana wax loogu qabto, waxuuna uga mahadceliyey caalamka taageeradooda joogtada ah, kana codsaday inay labo laabaaan taageeradooda, si loo helo dowlad leh hay’ado u adeega shacabka soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Somalia ayaa 31kii Janaayo shir jaraa’id ku qabtay xarunta Midowga Afrika, kana warbixiyey sida wafdiga Somalia loo soo dhoweeyey, isla markaasna caalamku caddeeyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero buuxda siiyo shacabka iyo dowladda Somalia. Sidoo kale waxuu ka codsaday caalamka in gargaar deg deg ah lala soo gaaro shacabka soomaaliyeed ee tabaaleysan.
La taliyaha Xafiiska Raysalwasaaraha (Eng.Abdirahman Yariisow)